ပြန်လည်ဖြည့်တင်းနိုင်သောအရင်းအမြစ်များမှထုတ် လုပ်၍ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ထုတ်ယူခြင်း၊ စူပါမားကတ်စျေး ၀ ယ်ခြင်းစသည်တို့အတွက်အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီးမြန်ဆန်စွာဖြန့်ဝေပေးသော Hyde မှပံ့ပိုးပေးသောစက္ကူထုပ်ပိုးပစ္စည်းများ
ပူပူနွေးနွေးသောက်ရန် Biodegradable ကော်ဖီစက္ကူခွက်ျား
အဖုံးျား 12OZ Ripple Wall Paper စက္ကူခွက်နှင့်အချိုရည်ျားအတွက်အချိုရည်ျား
Single Wall Food grade စက္ကူရေနွေးခွက်ခွက်လက်ကိုင်နှင့်"Single Wall Food grade စ...
၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းြေ ost ဇာပြုလုပ်နိုင်သောစိတ်ကြိုက်ပုံနှိပ်ထားသောရေခဲုန့်ခွက်"၁၀...
အဖုံးပါ 4OZ ရေခဲုန့်ရောင်စုံရေခဲုန့်စက္ကူခွက်ျား"အဖုံးပါ 4OZ ရေခဲုန့်ရောင်စုံရေခ...
Customized Double PE Coated Disposable Luxsury စက္ကူရေခဲုန့်ခွက်ျား"Customized D...
Biodegradable Disposable Frozen Yogurt Cup Paper Ice Ice Container"Biodegradable...
Biodegradable စိတ်ကြိုက်ရိုက်နှိပ်ထားသော Ice Cream စက္ကူခွက်"Biodegradable စိတ်က...
Single Wall အရည်အသွေးြင့်ရေခဲုန့်စက္ကူခွက်"Single Wall အရည်အသွေးြင့်ရေခဲုန့်စက္က...
ခေါက်ဆွဲအတွက်တစ်ခါသုံး Kraft စက္ကူစွပ်ပြုတ်ပန်းကန် "ခေါက်ဆွဲအတွက်တစ်ခါသုံး Kraft...
လက်ကားအဖြူရောင် ၁၂ အောင်စထုတ်ယူနိုင်သောတစ်ခါသုံးစက္ကူဟင်းချိုခွက်ျား"လက်ကားအဖြူရ...
စိတ်ကြိုက်ပုံနှိပ်နိုင်သောပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော kraft စွပ်ခွက်တ်ခွက်အရောင်းြှင...
ပူပူနွေးနွေးအချိုရည်အတွက် Kraft စက္ကူဟင်းချိုခွက်ကွန်တိန်နာ"ပူပူနွေးနွေးအချိုရည်...
Biodegradable ပြုလုပ်နိုင်သောလက်ကားရိုက်နိုင်သော Square Kraft စက္ကူအိတ်
စိတ်ကြိုက်ပုံနှိပ်ထားသောစျေး ၀ ယ်ထုပ်ပိုးထားသော Kraft စက္ကူအိတ်လက်ကိုင်ျား
လက်ကိုင်ပါ Biodegradable အကြ်းခံနိုင်သော Kraft စက္ကူအိတ်လက်ကား
Bakery အိတ်ခြောက်အသီးခြောက်အိတ် Baguette ထုပ်ပိုးအိတ်နှင့်ပြတင်းပေါက်"Bakery အိတ...
Recycled Snacks Bread Cookie စိတ်ကြိုက်စက္ကူထည့်ထားသောအိတ်"Recycled Snacks Bread...
လက်ကိုင်ပါ Biodegradable အကြ်းခံနိုင်သော Kraft စက္ကူအိတ်လက်ကား"လက်ကိုင်ပါ Biodeg...
အဖုံးပါသောပြောင်းဖူးအစာသေတ္တာအဖုံးပါ ၀ င်သောပျက်စီးနိုင်သောဟင်းချိုပန်းကန်"အဖုံး...
Eco Friendly Bowl တစ်ခါသုံး Bagasse ီးဖိုချောင်သုံးပန်းကန်ျား"Eco Friendly Bowl ...
အဖြူရောင်ပတ် ၀ န်းကျင်ပျက်စီးနိုင်သော Bagasse Bowl ပန်းကန်လုံးသည် Compastable Bo...
Square Biodegradable တစ်ခါသုံးကြံသကာပန်းကန်လုံး"Square Biodegradable တစ်ခါသုံးကြ...
တစ်ခါသုံး Bagasse Dinnerware ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းဖျက်စီးနိုင်သောဇလုံ"တစ်ခါသုံး Baga...
တစ်ခါသုံးအဖုံးပါသောသကြား Bagasse ပျော့ဖတ်သေတ္တာဘူးကိုအဖုံးျားနှင့်ဖုံးထားသည်"တစ်...
အစားအစာျားအတွက်ြေဆွေးပြုလုပ်နိုင်သည့် Bagasse Microwavable ကြံဗန်း
၄ ခန်းတွဲ Biodegradable တစ်ခါသုံးအစားအစာဗူးကိုအဖုံးဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားပါ"၄ ခန်းတွဲ ...
တစ်ခါသုံးအဖုံး ၃ ထပ်ပါ Cornstarch ီးဖိုချောင်သုံးဗန်းကိုအဖုံးပါပါ။တစ်ခါသုံးအဖုံး...
Biodegradable Eco Lunch အစားအစာတစ်ခါသုံးအဖုံးပါကော်ှုန့်ဗန်းနှင့်အဖုံး"Biodegrad...
နေ့လည်စာအတွက်သုံးနိုင်သောအစာကြေလွယ်သောကော်ှုန့် ၄ ခန်းနေ့လည်စာအတွက်သုံးနိုင်သောအ...
ကြံ ၂ ခါသုံးနိုင်သောတစ်ခါသုံးအစားအစာကွန်တိန်နာ
ထည့်သွင်းနိုင်သော 650ml Bagasse Eco Friendly Disposable Food Container
Biodegradable Clamshell Food Corn Starch Container
ြေဆွေးပြုလုပ်နိုင်သောကြံသကြား Bagasse Clamshell ထုပ်ပိုးထားသောအစာပုံး
Eco-green Cornstarch BBQ Box သည်တစ်ခါသုံးပျက်စီးနိုင်သောအစာချေဖျက်နိုင်သောကွန်တိ...
Biodegradable ကြံသကာ Clamshell Takeaway အစားအစာကွန်တိန်နာ
Eco-Green သုံးနိုင်သည့် Flatware Biodegradable Plastic Cornstarch Fork
ဆန်းသစ်သောအစားအစာအဆင့် Biodegradable ၇ လက်အရွယ်ပြောင်းကော်ှုန့်ဇွန်း
၁၄၀ ီလီီတာတစ်ခါသုံးပျက်စီးနိုင်သော Biodegradable Corn Starch Cutlery
Biodegradable Cornstarch ၁၀၀% Compostable အသုံးအဆောင် CPLA Cutlery Set
Biodegradable CPLA ၇ လက်ကိုယ်ပိုင်ြေဆွေးသုံးီးဖိုချောင်သုံးအစုံ
ြေဆွေးသုံးနိုင်သောဇွန်းခက်ရင်းသုံး PLA ီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းျား
Hydepackage သည် Coffee Bar ဖွင့်မည့်ရက်နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှ၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ငါတို့ကသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုသုံးနေတာတစ်နှစ်နီးပါးရှိပြီ၊ အဲဒါတွေကိုချစ်တယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအသိရှိသောဧည့်သည်များသည်ထုတ်ကုန်များကိ
နောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ကုန်သတင်းအချက်အလက်များနှင့်သတင်းများကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီကျွန်ုပ်တို့ update ပေးပါမည်။ အခြားဆက်စပ်အကြောင်းအရာများအားစိတ်ဝင်စားပါက ကျေးဇူးပြု၍ message ပို့ပါ။
သင့်အတွက်အဆင်ပြေသောမည်သည့်နည်းနှင့်မဆိုကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အီးမေးလ် (သို့) တယ်လီဖုန်းမှတဆင့် ၂၄/၇ ရက်ရရှိနိုင်ပါတယ်။
အခန်း ၂၄၀၈-၂၄၁၂; အဆောက်အအုံ B; Huadi ဘဏ္Centerာရေးစင်တာ; Qian-Shan လမ်း၊ HeFei မြို့၊ AnHui ပြည်နယ်; တရုတ် (၂၃၀၀၃၁)